१० वर्षमा अवकाश लिनु पर्ने कुराहरु तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B10B बजार समाचार
के तपाई सोचिरहनु भएको छ कि तपाई १० वर्षमा अवकाशको लागि कत्तिको तयार हुनुहुन्छ?
चीजहरू तपाईलाई १० बर्षमा अवकाश लिने बारे जान्नु आवश्यक छ
सम्पादकको पिक मार्च 14, 2020 मार्च 12, 2020 जेनिफर L ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, स्थिर आय, निवेश
सेवानिवृत्ति हुनुभन्दा एक दशक पहिले अनुक्रम जोखिमको बिरूद्ध संरक्षण भनेको भविष्यमा के गलत हुन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नु हो।
सुरक्षित अधिनियमले तपाईंलाई कुनै पनि उमेरमा तपाईंको IRA मा योगदान जारी राख्ने अनुमति दिन्छ जब सम्म तपाईं अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ।
एक वार्षिकी पनि तपाइँको सेवानिवृत्ति वर्ष को लागी ग्यारेन्टी आय को एक स्रोत हुन सक्छ।
सेवानिवृत्ति योजना काफी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ यदि तपाईं समय भन्दा पहिले तयार छैन। तपाईको बचतलाई निवृत्तिभरणको लागि आकलन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तर यो रिटायरमेन्ट रेड जोनको समयमा बढि महत्वपूर्ण हुन्छ। सेवानिवृत्ति भन्दा दस बर्ष अघि वा पछाडि रेड जोन द्वारा मानिन्छ वित्तीय पेशेवरहरु। तपाइँको सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो यस समयमा व्यवहार कसरी तपाइँ तपाइँ सेवानिवृत्त पछि जीवन स्तर निर्धारित गर्दछ।
शुभ समाचार यो हो कि तपाईं यस समयावधिका चुनौतिहरूको बारेमा जानेर खुशीयाली र सहज सिलि .्ग अवकाशको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यस पोष्टमार्फत पढ्नुहोस् तपाई कसरी एक सुरक्षित भविष्यको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जान्नको लागि जब तपाई सेवानिवृत्तिबाट केवल १० वर्ष टाढा हुनुहुन्छ।
सेवानिवृत्ति भन्दा १० वर्ष टाढा, तपाइँको सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियोहरूले लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ जुन तपाइँलाई तपाइँको सुनौलो वर्षको लागि अधिक आम्दानी बनाउन र तपाइँको सिद्धान्तको रक्षा गर्न वार्षिकीहरूको विविधतामा मद्दत पुर्‍याउँछ।
तपाईंको जोखिम सहिष्णुता निर्धारण गर्नुहोस्
जब तपाई सेवानिवृत्तिबाट केवल एक दशकमा टाढा हुनुहुन्छ, तपाई सायद आफ्नो बचतको रक्षा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यस समयमा, तपाईले जोखिमहरूको लागि योजना बनाउनु पर्छ जुन तपाईको बाटोमा आउन सक्छ यदि तपाई भालु बजारमा सेवानिवृत्त हुनुहुनेछ। सेवानिवृत्तिबाट १० बर्ष पछि, तपाईको सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियोले उच्च-गुणस्तरको स्टक र लगानी बन्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसले तपाईको सुनौलो वर्षको लागि बढि आम्दानी बनाउन मद्दत गर्दछ।
अनुक्रम जोखिम बिरूद्ध सुरक्षा गर्नुहोस्
भालु बजारमा सेवानिवृत्ति एक दशक पछि अवकाशमा मन्दी भन्दा धेरै हानिकारक छ। न केवल यसले कत्तिको फिर्ता लिन सक्छ भन्नेमा नकारात्मक असर पार्छ, तर यसले पछि तपाईको सेवानिवृत्तिमा गरीब फिर्ताको कारण पनि निम्त्याउँछ। सेवानिवृत्ति हुनुभन्दा एक दशक पहिले अनुक्रम जोखिमको बिरूद्ध संरक्षण भनेको भविष्यमा के गलत हुन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नु हो। तपाईं निम्न तरिकाले सेवानिवृत्ति अघि र पछाडि क्रम जोखिमहरू विरूद्ध सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईको रिटायरमेन्टको लागि अधिक बचत गर्न सक्दो लामो समयसम्म काम गरिरहनुहोस्। विशेष गरी तपाईंको शिखर कमाई वर्षहरूमा, व्यक्तिगत लगानी खाता खोल्नुहोस् र ती आयहरू मध्ये अधिकतम बनाउनुहोस्।
बचत र लगानी जारी राख्नुहोस् तपाईं अवकाश पछि पनि। व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाताका साथ कामदारहरूले age० 70/२ उमेर सम्म मात्र योगदान गर्न सक्दछन्, तर त्यो उमेर सीमा हटाइएको छ। सुरक्षित ऐन तपाइँ कुनै पनि उमेरमा तपाइँको काम गरिरहनु भएको बेलामा तपाइँको IRA मा योगदान जारी राख्न अनुमति दिन्छ।
उच्च-गुणस्तर, लाभांश-भुक्तान स्टकहरूमा लगानी गरेर तपाईंको पोर्टफोलियो विविधता दिनुहोस्। तपाईं आफ्नो पोर्टफोलियो विस्तार गर्न सरकारी बन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि यो सत्य हो कि बर्षहरुमा तपाईले सेवानिवृत्तिका लागि बचत गर्दै हुनुहुन्छ यदि बजारमा गिरावट आयो भने तपाईको सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न समय हुन सक्छ जुन मार्केटको अस्थिरतासँग सम्बन्धित छ तर एक पटक तपाईले आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न शुरू गर्नुभयो जुन बजारको अस्थिरताले लामो समयसम्म ठूलो असर पार्न सक्छ। तपाईंको सम्पत्तिहरू रहनेछ र तपाईं सहज अवकाशमा कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको फिर्ताको अनुक्रममा कत्ति ठूलो प्रभाव पार्छ भन्नेमा एक कारक। यो वर्ष बर्षको प्रतिफल हो जुन तपाइँको सेवानिवृत्ति सम्पत्तिहरूले निरन्तर अनुभव गरिरहनुपर्दछ जब तपाईं उनीहरूलाई रिटायरमेन्ट आयको लागि तान्दै हुनुहुन्छ।
यहाँ केही उदाहरणहरू छन्। भन्नुहोस् तपाइँ एक मिलियन डलरको गुँड अण्डाको साथ सेवानिवृत्त हुनुहुन्छ र मुद्रास्फीतिको लागि हरेक वर्ष थोरै बृद्धि गरेर प्रति वर्ष $ ,50,000०,००० फिर्ता लिने योजना बनाउनु भएको छ, यस बीचमा तपाइँको बाँकी सम्पत्ति अझै लगानी गरिएको छ र अझै पनि बजारको उतार चढावहरूको अधीनमा छ। अवश्य हामी ती उतार चढावहरूको भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं, तपाईको फिर्ताको अनुक्रम, तर मानौं तपाईको सेवानिवृत्तिको पहिलो वर्षमा तपाईले साँच्चिकै राम्रो प्रतिफल पाउनुहुनेछ (+२)) र अर्को वर्ष तपाईले अर्को सकारात्मक रिटर्न पाउनुहुनेछ, (+ 1) ) तपाईंको पहिलो वर्षको रूपमा राम्रो छैन तर अझै सकारात्मक छ। त्यसो भए तीन वर्षमा, अलि कम (+ +)।
त्यसपछि वर्ष चार मा, आउच! बजार खस्छ र तपाईंले घाटा लिनुहुन्छ (-15)। अब कम्पाउन्डिंगको साथ, तपाईं ती years बर्षमा राम्रो सकारात्मक फिर्ताको औसत हुनेछ (%%)।
त्यसो भए तपाईको वार्षिक निकासी पूर्ण रूपमा सम्पत्ति प्रयोग नगरे सम्म ठीक क्रममा फिर्ताको क्रमलाई दोहोर्याइरहौं। यस उदाहरण मा कि आय को 38 XNUMX बर्ष हो।
तर, के हुन्छ यदि तपाईंले डाउन मार्केटमा पैसा फिर्ता गर्न सुरु गर्नुभयो भने? फेला पार्नको लागि ती तीनै नम्बरहरू लिनुहोस् र यस पटक हामी क्रमलाई उल्टाउनेछौं।
तपाईं अझै पनि समान चक्रवृद्धि औसत प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर यस पटक तपाईं एक महत्त्वपूर्ण घाटा (-१)) को साथ शुरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि ठीक लाभ (+ +), त्यसपछि राम्रो लाभ (+ 15) र त्यसपछि, वास्तवमै राम्रो लाभ (+) २)) र पहिले जस्तो हामी तपाईको वार्षिक निकासी पूर्ण रूपमा सम्पत्ति प्रयोग नगरे सम्म हामी त्यो क्रम दोहोर्याउने छौं।
तपाईको सेवानिवृत्ति पैसा कहिले सम्म रहन्छ? फिर्ताको क्रमले तपाईंको रिटायरमेन्ट पोर्टफोलियोको मानलाई असर गर्न सक्छ। वार्षिकीहरूले तपाईंको अवकाश पैसा १२० सम्म रहन्छ भनेर निश्चित गर्न मद्दतको लागि समान अन्तरालहरूमा भुक्तानहरूको एक श्रृंखला प्रस्ताव गर्दछ।
तर यस उदाहरण मा यो लगभग १ years वर्ष जति चाँडो हुन्छ। तपाईंले १ 13 बर्षको आय गुमाउनुभएको छ र मात्र किनभने तपाईंले भिन्न अर्डरमा उस्तै फर्काउनुभयो। अवश्य पनि तपाईंको फिर्ताको अर्डर पूर्वानुमान गर्ने कुनै तरिका छैन कि यो अप मार्केट, डाउन मार्केट, वा सपाट बजार हुनेछ जब तपाईं आफ्नो सेवानिवृत्ति शुरू गर्नुहुन्छ।
जहाँसम्म सम्भावित सेवानिवृत्ति आय समाधानहरू जस्तै छन् वार्षिकी यसले मार्केट अस्थिरताको कारण घाटा विरूद्ध संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ। एक वार्षिकी पनि तपाइँको सेवानिवृत्ति वर्ष को लागी ग्यारेन्टी आय को एक स्रोत हुन सक्छ। याद गर्नुहोस् प्रत्येक थप वर्षमा तपाईंको सम्पत्तीहरू अन्तिम, कम आर्थिक चिन्ताको विषय र सान्त्वनाको स्तर हुन सक्छ।
फिक्स्ड इन्डेक्ड एन्युइटी (एफआईए) बाट फाइदा
फिक्स्ड अनुक्रमित वार्षिकी धेरै आधारभूत सेवानिवृत्ति चिन्ताको लागि एक उत्तम समाधान हो। तिनीहरूले केवल तपाइँको कडा कमाएको पैसा बचाउँदैन तर दीर्घायु जोखिमको समाधान प्रदान गर्दछ। यहाँ निश्चित अनुक्रमित वार्षिकीका दुई प्रमुख फाइदाहरू छन्:
तपाईंको सिद्धान्त सुरक्षित गर्नुहोस्: एफआईएको शीर्ष फाइदा भनेको बजार अस्थिरताको साथ पनि उनीहरूको मूल्य हुँदैन। यसको मतलव तपाईको बचत बजारमा उतार चढावको अधीनमा हुँदैन। तपाइँको रुचि यो तपाइँको सिद्धान्त मा सम्मिलित गरी कहिले पनि हराउने छैन।
दीर्घायु जोखिममा एक समाधान प्रदान गर्नुहोस्: औसत मानव युग बढ्दै जाँदा यसको मतलब तपाईले आफ्नो लागि लामो अवधिको लागि अवकाशको समयमा प्रदान गर्नुपर्नेछ। दीर्घायु जोखिमले निवृत्तिभरण पातलो तान्न सक्छ। यसका साथै, लामो अवधिका हेरचाह खर्चहरूले अवकाशका लागि तपाईंको बचतलाई बिगार्न सक्छ। FIAs ग्यारेन्टी लाइफमेन्ट आय प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं कहिले पनि आफ्नो आय कमाउन सक्नुहुन्न।
सेवानिवृत्ति योजना केहि चीज होइन जुन तपाईले पछि रोक्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाई सेवानिवृत्तिबाट केवल एक दशक टाढा हुनुहुन्छ। सुरक्षित मद्दत लिनुहोस् र सुरक्षित भविष्यको इनामदायी परिणामहरू प्राप्त गर्न स्थिर अनुक्रमित वार्षिकीहरूमा लगानी गर्नुहोस्।
जेनिफर ल्यांग वित्तीय सेवाहरू एक स्वतन्त्र एजेन्ट हो र निकट प्रतिस्पर्धी जीवन बीमा क्यारियर दरहरूलाई करीव निगरानी गर्दछ तपाईंलाई उत्तम सम्भव फिक्सड इन्डेक्स एन्युटी प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् एक वित्तीय योजना डिजाइन प्राप्त गर्न जुन तपाईंको विशेष परिस्थितिहरूको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
वार्षिकी वार्षिकी उद्धरण भाडा बजार सांप्रदायिक समाचार कोरोना भाइरस CORVID-19 DOW जोन्स सूचकांक DOW सिद्धान्त वित्तीय सल्लाह आर्थिक सल्लाहकार कसरी वार्षिकी कार्य गर्दछ सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति योजना S&P 500 सूचकांक शेयर बजार को सुरक्षित विकल्प शेयर बजार
जेनिफर एल एक लेखक, एक सार्वजनिक वक्ता, एक सेवानिवृत्ति संरक्षण विशेषज्ञ र स्वतन्त्र धन योजनाकार रणनीतिहरु को होस्ट हो।
ट्रम्पलाई आरोपित एक्सपोजर पछि कोरोनाभाइरसको लागि जाँच गरिने छैन
चराहरू जीवनशैली सल्लाह: कसरी आफ्नो चरालाई खुशी र स्वस्थ राख्ने